Strobe Edge ( 2015 ) - Myanmar Asian TV
2015 ခုနှစ်မှာ ထွက်ရှိထားတဲ့ Japanese Romance Movie လေးပါ ..
နီနာကို ခိနိုရှိတဆိုတဲ့ကောင်မလေးဟာကျောင်းသစ်ကို ပြောင်းလာပြီး ရမ် ဆိုတဲ့ကောင်လေးကိုရထားပေါ်မှာ
ဒါပေမဲ့ ရမ်မှာက ချစ်သူကောင်မလေးရှိနေပြီးသားဖြစ်နေတယ် … တခြားကောင်လေးတွေက နီနာကို ကို ချစ်ခွင့်ပန်ပေးမယ့်လည်း ရမ် တစ်ယောက်ကိုပဲချစ်နေမိတဲ့ နီနာကို ဘယ်လိုဆက်ဖြစ်မလဲ …
သူ့အချစ်တွေကို ရမ် ကသတိပြုမိမှာလား ??
ရမ်ကကောသူ့ကောင်မလေးနဲ့ ဘယ်လိုဆက်ဖြစ်ကြမလဲဆိုတာကို ဒီကားလေးမှာကြည့်ရှုကြပါလို့ …
ကျောင်းသား အချစ်ဇာတ်လမ်း fancy drama သုံးပွင့်ဆိုင်ဇာတ်လမ်းလေးဖြစ်ပါတယ် ?
မင်းသမီး၁ယောက် မင်းသား၂ယောက်ပါဝင်တဲ့ ဒီဇာတ်လမ်းလေးမှာဘယ်သူနဲ့ပေါင်းဖက်မလဲ ??
ကျောင်းသားဇာတ်လမ်းလေးဖြစ်တဲ့အတွက် လူငယ်တွေအကြိုက်ဖြစ်မှာပါ … ??
Rating အရ IMDb မှာ 6.4/10 ရရှိထားပါတယ် …
Translator : May Thinzar Myint
Actors: Arisa Sato, Jingi Irie, Kasumi Arimura, Sota Fukushi, Yuina Kuroshima, Yuki Yamada
Soliddrive.co Myanmar626 MB Download Soliddrive.co Myanmar626 MB Download